Iingcaphuno ezivela kuLeonidas yaseSparta
Imbali kunye neNkcubeko Iincwadi
01 ngo 01
ULeonidas weeNgxelo zeSparta
Leonidas King of Sparta. Clipart.com
ULeonidas (Ephakathi kwekhulu lesi-6 BC-480) nguFaro waseSparta owayekhokela abaseSpartans kwi- Battle of Thermopylae (480 BC). Ngombulelo kwiibhayisikobho ezingama-300, abaninzi abanokungazi ngaye ngoku bayazi igama lakhe. I-Plutarch (c. AD 45-125), ibhali-biographer ebalulekileyo yamadoda aseGrike namaRoma, wabhala nencwadi ngamazwi aseSpartans adumile (ngesiGrike, ngesihloko lesiLatini esithi "Apophthegmata Laconica") . Ngezantsi uzakufumana izicaphulo, ezibhekiswe yiPlutarch kuLeonidas, ezihlobene nokuya kwakhe imfazwe namaPersi. Kanye kunye neengcamango, ezinye zeendlela eziqhelekileyo zinokuqhelana nawe kwii-movie. Umthombo wale ngu-1931 i-Loeb ye-Classical Library kwiBill Thayer's Lacus Curtius site:
ULeonidas, unyana kaAnaxandridas
2 Umfazi wakhe uGorgo [ owesifazane ohlakaniphileyo nobalulekileyo waseSpartan ] wabuza, ngelixa wayefudukela eThemopylae ukuba alwe namaPersi, ukuba wayenayo nayiphi na imiyalelo yokumnika, kwaye wathi, "Ukutshata abantu abalungileyo nokuphatha bantwana. " [Kwixesha elithile lombutho wamaPersi kamva, esinye isiGrike, kodwa kungekhona intombikazi yaseSpartan inendima ebalulekileyo. Funda ngo- Artemisia waseHalarnarnassus .]
3 Xa ama- Ephos [ iqela le-5 elikhethwe ngonyaka kuRhulumente waseSpartan ] wathi uthabatha amadoda ambalwa kwi-Thermopylae, wathi, "Kuninzi kwi shishini apho sihamba khona."
4 Kwaye baphinda bathi, "Ngaba niye nagqiba kwelokuba nilungele enye into ukuze nilondoloze abahlali be-barbari?" Wathi, "Ngokwenjenjalo, kodwa ngokwenene ulindele ukufa kumaGrike."
5 Xa efikile e-Themopylae wathi kubahlobo bakhe kwiingalo, "Batsho ukuba umnqabileyo uye wasondela kwaye uhlala ixesha elide." Inyaniso, ngokukhawuleza siza kubulala abo bantu, okanye kufuneka sibulawe. "
6 Xa umntu wathi, "Ngenxa yeentolo zabanqabini akunakwenzeka ukubona ilanga," wathi, "Ngaba akuyi kuba mnandi, ke, ukuba siya kuba nomthunzi wokulwa nawo?"
7 Xa omnye umntu wathi, "Basondele kuthi," nathi ke sisondele kubo. "
8 Xa umntu wathi, "ULeonidas, ulapha ukuba uthathe umngcipheko ono mngcipheko kunye namadoda ambalwa kangaka?" Wathi, "Ukuba nicinga ukuba ndiyathembela kumanani, ngoko yonke iGrisi ayinelisekile, kuba yincinci encinci yamanani abo; kodwa ukuba ngaba ngumbindi wamadoda, le namba iya kwenza."
9 Xa omnye umntu wathi into efanayo, wathi, "Inyaniso ndithatha abaninzi ukuba bonke babulawe."
10 U- Xerxes wabhala kuye, "Kunokwenzeka kuwe, ngokungalwi noThixo kodwa ngokuzibeka ecaleni kwam, ukuba ube ngumlawuli wedwa waseGrisi." Kodwa wabhala wathi, "Ukuba unolwazi lwezinto ezintle zobomi, uya kuziyeka ukukhanga izinto zabanye; kodwa ukuba ndifele iGrisi kungcono kunokuba ngumbusi wedwa phezu kwabantu bohlanga lwam. "U
11 Xa uXerxes wabhala kwakhona, wathi: "Yanikela iingalo zakho," waphendula wathi, "Woza uwathabathe."
12 Unqwenela ukubandakanya intshaba kanye, kodwa abanye abalawuli, ngokuphendula kwisiphakamiso sakhe, wathi kufuneka alinde bonke abadibeneyo. Uthi, "Kutheni na ukuba bonke abakhoyo bazimisele ukulwa? Okanye awuboni ukuba abantu abodwa abalwe notshaba ngabo bahloniphayo nookuhlonela ookumkani babo?" [Bona i-" Ephialtes ne-Anopaia" icandelo le -Battle of thermopylae .]
13 Wabiza amajoni akhe adle ukutya kwasekuseni njengokungathi bafanele badle isidlo sakusiya kwenye ihlabathi. [Bona iGrike emva kokufa .]
Ukubuzwa ukuba kutheni amadoda angcono athetha ukufa okuzukisayo ebomini obungathandabuzekiyo, wathi, "Ngenxa yokuba bakholelwa ukuba isipho sesimo kodwa enye inokuzilawula."
15 Nqwenela ukugcina ubomi babantu abancinci, kwaye ngokuzi kakuhle ukuba abayikuzithoba kulolu hlobo unyango, wabanika ngamnye umyalezo wokufihla ngasese waza wabathumela kwi-Ephors. Wakhulelwa umnqweno wokusindisa kunye namadoda amathathu akhule, kodwa aqondisa ukuyila kwakhe, kwaye akaze angenise ukungenisa iimpatches. Omnye wabo wathi, "Ndiza nomkhosi, kungekhona ukuhamba nemiyalezo, kodwa ukulwa;" kwaye okwesibini, "Ndibe ngumntu ongcono xa ndihlala apha"; kwaye wesithathu, "Andiyi kuba ngasemva koko, kodwa kuqala kulwa."
Bona kwakhona iMigomo ye-Thermopylae .
IsiKhokelo soFundo lweTystateral
Ziziphi iiNqununu zeeLatin zaseLatin?
Umxholo othi "Dlala ngaphakathi kweDlalo"
Valens kunye ne-Battle of Adrianople (Hadrianopolis)
Isishwankathelo seSahluko seBarry Strauss '' iMfazwe yeTrojan: Imbali entsha '
Kuthetha ntoni iLatin Latin?
Isikhokelo sokuFunda se-Odyssey
Itheyibhile yePeriodic Printable of Elements - Ii-Valence Charges
Iphrofayela: I-Big Bopper
Iintlanzi ezili-6 ezona zihamba ngokukhawuleza
Cómo puede un ciudadano pedir e esposo que radica en otro país
Yithini i-Tone's Tone?
I-Architecture e-Minnesota kwi-Traveler Casual
Umzekelo weeNzululwazi ezimbini zeSampula T kunye neNkcazo yokuThembela
IFleet White White: USS Virginia (BB-13)
Iholide yeThoto yekholeji yaseItca
IiJokes zokuThuthukiswa kwezeMpilo eziPhambili ezi-10
Act Slave Act
I-Admissions yaseYunivesithi yaseMcKendree
Dobro: Inkcazo kunye neNkcazo
Abaculi beSizwe abaTshakazi beTest 10 abaDumileyo
"Iholide yeBetty's Vacation" ayikho iholide!
Funda NgeziJamani eziNinzi zesiJamani kunye ne--n ne-endings
Iingubo eziphezulu ze Cover Cover of '80s Songs
Broomcorn (Panicum miliaceum) - Imbali Yomzi
Indlela yokwenza i-Ice-dry Dry Homemade
Tu Quoque - I-Ad Hominem Ubuxoki Ukuba Uyenzile!
I-SAT Score Ukuthelekiswa kokufakwa kwiiKholeji zaseKentucky
Inkcazo yeNgcamango yezoLuntu kunye nokuPhepha kweNcwadi
Imbali yeeNyosi zeNyosi kunye nokuLawula uLuntu lwe-Apis mellifera